Wararkii ugu dambeeyey dagaalada Magaalada Muqdisho (Sawiro) – SBC
Wararkii ugu dambeeyey dagaalada Magaalada Muqdisho (Sawiro)
Warar dheeraad ah ayaa iska soo dabadhacaya oo la xiriira dagaalada ba’an ee ka soconaya magaalada Muqdisho gaar ahaan daafaha Suuqa weyn ee Bakaaraha, iyadoo dagaalkan uu sii xoogeystay saacadihii al soo dhaafay. Dagaaladan oo ka soconaya wadada wadnaha ee kaabiga ku haysa Suuqa bakaaraha waxaana dagaaladan ay qarxeen saaka waaberigii xiligaasi oo xoogaga Al-Shabaab ay soo qaadeen dagaal rogaal celis ah oo ay ku doonayeen inay dib ugu qabsadaan fariimadii ay ku lahaayeen wadada wadnaha oo shaley u gacan gashay ciidamada DFKMG ah oo garabsanaya kuwa AMISOM.
Fariisimo ay ka sameysteen ciidamada dawlada & kuwa AMISOM duleedka Bakaaraha gaar ahaan wadada wadnaha ayaa waxaa saaka ku soo waadey weerar xoogaga Al-Shabaab, iyadoo dagaalkaasi uu xoogeystey duhurnimadii maanta. Khasaaraha dagaaladan ay sababeen ayaa sii kordhaya iyadoo wararka SBC ay ka helayso ilo wareed oo kala duwan ay sheegayaan in dagaaladaasi ayku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamaya & waliba dad rayid ah oo aan shaqo ku laheyn dirirta oo ay galaafatey rasaasta & madaafiicda la iswaydaarsanayo.
Xoogaga Shabaabka ayaa waxay dhufeyso adag ka qoteen gudaha Suuqa Bakaaraha taasi oo u muuqanaysa inay mudo qaadan karto sida looga saaro maadama suuqa aanu laheyn wadooyin badan iyo dhismayaasha faraha badan kuwaasi oo keeni kara in dagaalku uu daba dheeraado. Dagaalkan oo u muuqanaya mid aan wali lagu kala bixin, ayaa sidoo kale waxaa hareer socota duqeymo xoogan oo loo geysanayo goobo ay degan yihiin dad rayid ah, duqeyn aan loo meel dayin oo la aaminsan yahay inay ka timid dhanka ciidamada AMISOM ayaa lagu asqeysiiyey degmooyinka Huriwaa, Yaaqshiid & Dayniile deegaanadaasi oo ah fariisimada ay ka soo duulaan ayna iska soo abaabulaan xoogaga Al-Shabaab.
Qaracanka & masiibada ay reebeen madaafiicdaasi ayaa ah geerida dad rayid ah oo aan waxba galabsan oo deegaanadaasi ku sugnaa, iyadoo masiibada ugu weyni ay ku dhacdey qoys aroos ah oo labadii lamaane oo ku jirey todobaadkii arooska madfac ku habsadey gurigooda ay ku geeriyoodeen. Dhinaca kale Isbitaalka Madiina ayaa la soo sheegayaa in la gaarsiiyey dhaawacyo fara badan oo ku waxyeeloobey dagaalada ka aloosan magaalada Muqdisho, iyadoo maamulka Isbitaalku ay sheegeen in ugu yaraan 60 qof oo dhaawac ah in la soo gaarsiiyey Ibsitaalka, iyadoo dadkaasi 20 ka mid ah ay qabaan dhaawacyo daran oo halis ah halka 15 kale ay ka baxeen isbitaalka ka dib markii loo fidiyey gargaar caafimaad oo deg deg ah.